Magnetic Stripe Card & IC Card2တွင် 1 Reader Support Multi Type Contact IC Card, Magnetic Stripe Card & Contact IC Card2တွင် 1 စာဖတ်သူကို, Magnetic Stripe Card & Contact CPU Card2တွင် 1 စာဖတ်သူကို
သံလိုက် Stripe ဟာ Card ကို & IC Card ကို2တွင် 1 စာဖတ်သူကို
သံလိုက် Stripe ဟာကတ်စက်ပစ္စည်း သံလိုက် Stripe ဟာ Card ကို & Contact CPU Card2တွင် 1 စာဖတ်သူကို, သံလိုက် Stripe ဟာ Card ကို & ဆက်သွယ်ရန် IC Card ကို2တွင် 1 စာဖတ်သူကို, သံလိုက် Stripe ဟာ Card ကို & IC Card ကို2တွင် 1 Reader Support Multi Type Contact IC Card
Read all 1,2,3 အပုဒ်, support read and write Atmel AT24C series and SLE series memory card and support T=0, T=1 communication protocol CPU card.
ကိုးကားစရာစံ: AT24C01A, AT24C02, AT24C04, AT24C08, AT24C16, AT24C64, AT24C128, SLE4432, SLE4442, SLE5542, SLE4418, SLE4428, SLE5528, ISO7816-(1-4) (T က = 1, T က = 0)
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန်: -20℃ ~ + 60 ℃
ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ: 90% (မဟုတ်တဲ့ငွေ့ရည်ဖွဲ့)
သံလိုက််ရောက်စွက်ဖက်ခုခံ: 19 Oersted
တုန်ခါမှုဆွဲ: 0.35မီလီမီတာလွှဲခွင်, အကြိမ်ရေ 10 ~ 55Hz, သုံးဝင်ရိုးညှနျကွားခစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့တုန်ခါမှု
လျှပ်ကာခုခံ: ပူပြင်းခြင်းနှင့်စိုစွတ်သောအခွအေန (40°, 95%) 5mΩ≮ insulator တွင်လည်းခုခံ
အမှားနှုနျး: < 0.5%
အလုပ်လုပ်ဘဝ: >100000 ကြိမ်
လက်ရှိ IC ကဒ်မှာလက်ရှိထည့်ပါ: 20Ma
IC ကဒ်စစ်ဆင်ရေး: 50Ma
သံလိုက် Stripe ဟာ
Card ကိုစံ: ISO ကို 7811, ပြီးနောက်, CADMV နှင့်အခြား format နဲ့
ပွတ်ဆွဲမြန်နှုန်း: 3~ 60 လက်မ / စက္ကန့်
အလုပ်လုပ်ဘဝ: >500000 ကြိမ်
လမ်းကြောင်း Read: အားလုံး 1, 2,3အပုဒ်
ကဒ်ထူ: 0.76~ 1.2mm
C-MR-100C Magnetic stripe card & IC ကဒ်2တွင် 1 စာဖတ်သူကို,Programmable magnetic card and IC card combined read/write device, the user can according to actual needs, by programming or configuration data formats and intelligent interface.
C-MR-100C Magnetic stripe card & IC ကဒ်2တွင် 1 Reader widely used in industrial, commercial, telecommunications, taxation, banking, insurance, အဖိုးအခများဆေးပညာဆိုင်ရာအပေါင်းတို့နှင့်မျိုး, query management system.
Support for multiple system: Windows XP ကို, Windows visa, Windows 7, Linuxk,စသည်တို့ကို.
I am interested in your product Magnetic Stripe Card & IC Card ကို2တွင် 1 စာဖတ်သူကို
prev: သံလိုက် Stripe ဟာကတ်နှင့် RFID Card ကို2တွင် 1 စာဖတ်သူကို, multi-function ကိုကတ် Reader ကို
နောက်တစ်ခု: ultra-သေးငယ်တဲ့သံလိုက် Stripe ဟာကတ်မှာ Data Collector, Mini ကိုသံလိုက် Stripe ဟာကတ်မှာ Data Collection ကို Module